Nokuba uyinkampani yokuqalisa okanye inkampani ehamba phambili yokurhweba, elona celomngeni lokwenza ishishini kukufumana imveliso yentengiso efanelekileyo yokwandisa inzuzo yakho.
Kuya kufuneka ufumane iimveliso ebezikhangelwa ngabantu kwaye uchonge iimfuno zabathengi bakho.
Okubaluleke ngakumbi, ufuna ukwandisa inzuzo ngokwandisa inzuzo yemveliso nganye.
Kule posi yebhlog, siya kukunceda ekufumaneni nasekuphandeni iimveliso ezinenzuzo enkulu ezinokuthengiswa.
Zithini iimida zenzuzo kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu?
Ixabiso lenzuzo lisekwe kwipesenti. Ibalwa ngokwahlula-hlula inzuzo (ingeniso thabatha inkcitho) ngokwengeniso nokuphinda-phinde nge-100. Umda wenzuzo ubonakalisa ubhetyebhetye beshishini lakho, apho umgama ophakamileyo wenzuzo, kokukhona ukulungelelana kwakho kuphakama.
Umzekelo, zimbini iinkampani, ezizezi iinkampani A kunye no-B. Imida yenzuzo yenkampani A no-B ngama-35% ne-10% ngokwahlukeneyo. Khawufane ucinge ukuba ukuba iindleko zabasebenzi zezi nkampani zimbini zinyuka ngesixa esifanayo, inkampani B ayinakuphinda yenze inzuzo, ngelixa inkampani A isenokufumana ingeniso. Ufuna ukugcina iindleko ziphantsi kangangoko ukuze ugcine umgama ophakamileyo wenzuzo ukuze ishishini lakho liphendule ngokuguqukayo ngakumbi kutshintsho. Imida ephezulu yenzuzo ikwathetha ukuba ishishini lakho linenzuzo enkulu;
Ke ngoko, abantu bakhetha iimveliso ezinemida ephezulu yenzuzo. Nokuba intengiso yakho ayiphezulu, ezi mveliso zinokukwenza ungenise ngakumbi.
Iimveliso ezinenzuzo ngakumbi ziluncedo kubo bonke abathengisi, ngakumbi kwiinkampani zokuqala. Iinkampani ezincinci okanye iinkampani ezingenamava azinayo indawo eninzi yeempahla kunye nentengiso, ke baya kwenza inzuzo ngokusekwe kwiimveliso zemigangatho ephezulu okanye kwiimveliso eziphezulu.
Iikhrayitheriya zokukhetha iimveliso ezikumgangatho ophezulu
Usenokuzibuza ukuba zithini iikhrayitheriya xa ufuna iimveliso ezinenzuzo ngakumbi. Ungaqala ngala manqaku aphambili alandelayo:
Ngokucacileyo, iimveliso zexabiso eliphantsi zizisa imbuyekezo engaphezulu. Bavelisa ezona nzuzo zibalaseleyo kwaye bandise inzuzo yakho.
Iimveliso ezinexabiso eliphantsi zikuvumela ukuba usete ii-markups eziphezulu. Ukunyuka kwexabiso eliphakathi kweefreyimu zemiboniso, amanzi asebhotileni, iincwadi kunye nezinye izinto zorhwebo ziphezulu kakhulu.
Ubungakanani obukhulu / ukukhanya
Nokuba ukhetha ukuthumela ngenqanawa ngokwakho, ukuhanjiswa kweqela lesithathu okanye ukuhambisa ngokuthe ngqo kumzi-mveliso, ufuna ukunciphisa uluhlu lweempahla okanye iindleko zokuhambisa.
Iindleko zokuhambisa ziya kwahluka ngokuxhomekeka kubungakanani bendawo yokugcina, uhlobo lwemveliso, indawo oya kuyo ngenqanawa, umrhumo wokuhambisa kunye nezinye izinto. Ukuba unohlahlo-lwabiwo mali lokufezekisa iindleko, uyakuchitha imali yakho kwinani elikhulu lezinto ezithatha indawo encinci, kunokuba ukhethe inani elincinci leemveliso ezimbaxa ukonyusa ukuthengisa.
Umzekelo, okuncinci nokukhaphukhaphu ubungakanani bemveliso, kokukhona ungafumana inzuzo ephezulu.
Kuya kufuneka ubambe ibhalansi phakathi kwexabiso kunye nomgangatho. Izinto ezinamaxabiso aphantsi zinokuba mgangathweni; abathengi bakho badanile ziimveliso zabo kwaye ngekhe bathenge kwivenkile yakho.
Iimveliso ezinemfuno ephezulu kodwa unikezelo oluphantsi
Iimveliso ezifunwa kakhulu zihlala njengezinto zangoku kule mihla, kwaye abathengi abaninzi bayazikhangela. Ukufumana iimveliso ezithandwayo, unokuphanda uluhlu lweemveliso ezithandwayo kumaqonga e-commerce anje ngeAmazon neShopify. Ngokulandela iintsingiselo zikaGoogle, iiposti zebhlog, amaqonga eendaba ezentlalo (njengeTikTok kunye neYouTube), uyakufumanisa ukuba zeziphi iimveliso ezithandwayo. Iimveliso ezongezelelweyo zokuqaliswa kwemveliso emitsha zifunwa kakhulu, kodwa unikezelo luphantsi kakhulu. Ngenxa yokuba i-PS5 isandula ukukhutshwa, abantu abaninzi bafuna imidlalo yePS5 kutsha nje.
Ukuba uthengisa iimveliso zonyaka, unokunyusa ukuthengisa. Ngokukodwa xa kukho iiholide okanye iiholide, izinto zepati, izinto zokubhala zokuqala kwexesha lesikolo, iziqhamo kunye nemifuno yamaxesha athile, izipho zoSuku looMama kunye neKrisimesi, njl.
Iimveliso ezili-17 ezikumgangatho ophezulu ezinokuthengiswa kwi-Intanethi
Ngenxa yobhubhane, abantu banyanzelwa ukuba bahlale emakhaya.
Ke ngoko, eli nqaku liza kubandakanya ukugcina indlu yomthengi wakho icocekile kwaye ikhululekile, imihombiso yasekhaya, ifanitshala yasekhitshini okanye izixhobo ezinokuthakazelelwa xa usebenza ekhaya, izixhobo zemidlalo ezenza ukuba abantu baqeqeshe ekhaya, kunye nobuhle okanye ubuhle obuza kunika abafazi ukuvutha ngexesha lokwahlula. Iimveliso zempilo.
Ngaphandle kokuqhubeka, makhe sijonge ezi mveliso zexabiso liphantsi kwaye ezinenzuzo kakhulu.
1. Izityalo ezingezizo ezokwenziwa
Xa kuthelekiswa nezityalo zokwenyani, izityalo ezingezizo ezenziweyo ziyimveliso enenzuzo enkulu enokuvuselela indawo yokuhlala ngaphandle kwesidingo sokhathalelo.
2. Izibane ezincinane ezinemibala
Njengezibane kwilizwe lamabali likhanyisa igumbi lakho okanye igadi, ukudala imeko-bume entle kunye nomoya wokuphila ongcono. Le mveliso iyimveliso ethandwayo yokuhombisa amagumbi olutsha.
3. Ukuhonjiswa kodonga
Izitikha zodonga ziimveliso ezinemida ephezulu yenzuzo. Ezi zincamathelisi zodonga, ezinokunqunyulwa kwaye zithunyelwe ngokuthanda, zinceda ukuhombisa kunye nokuhombisa izindlu ezidikayo. Kukho iintlobo zezincamathelisi zokuhombisa, ezinjengezincamathelisi zezityalo neentyatyambo, izincamathelisi zesakhelo sefoto, izinto ozithandayo ezikhazimlayo zabantwana okanye iikhathuni, njl. izitikha ezisemgangathweni ezisemgangathweni ziya konakalisa iindonga zegumbi.
Isakhelo sefoto sinceda ukulungisa nokubonisa imizobo, iifoto, iiposta kunye nemizobo yabantwana. Ngokwemeko yokuthengisa kwinqanaba lesakhelo sezithombe zeAmazon, izakhelo zomthi ezimnyama zezona zidumileyo, ngamaxabiso aqala kwi-10 ukuya kwi-50 yeedola.
5. Phonsa Umqamelo
Ukongeza ekuxhaseni umqolo wakho, imiqamelo yokuhombisa ibonelela ngokuhombisa indawo yakho esisiseko yokuhlala kunye nokuphucula intuthuzelo. Kukho iindlela ezahlukeneyo zoyilo lomqamelo. Izitayile ezaziwa kakhulu zibandakanya ukuprintwa kweentyatyambo, ukushicilelwa kombala, ubugcisa be pop, isitayile se-bohemian kunye nezixhobo zemfumba ende.
6. Ibhokisi yobucwebe
Ukuba unezacholo ezininzi, kodwa ungazi ukuba uzipakisha njani kwaye uzilungiselele, unokucinga ngokuthenga ibhokisi yezacholo okanye ibhokisi yokuhombisa. Amaxabiso ezi bhokisi ayahluka ngokwendlela ayilwe ngayo nezinto ezisetyenzisiweyo. Kodwa nokuba ixabiso lincinci, libukeka lihle kwaye longeza ukuqaqanjiswa kwidesika yakho, itafile yekofu kunye netafile esecaleni.
Amakhandlela anokulunciphisa uxinzelelo kwaye enze umoya ozolileyo. Ngokophando, amakhandlela ane lavender anuka kamnandi ngawona ahlaziyayo. Ebusika, amakhandlela anokuyigcina ifudumele indlu yakho, kwaye zezona zikhetho zixhaphakileyo zeKrisimesi.
Ngokufana namakhandlela, i-humidifiers yongeza intuthuzelo ekhayeni lakho kwaye kwangaxeshanye yonyusa ukufuma emoyeni. Unako kwakhona ukuthengisa iziqholo kunye neeoli ezifunekayo humidifier. Zonke ezi mveliso zinenzuzo enkulu zinokuphucula umgangatho wokulala kwaye zongeze ubumnandi kwigumbi lakho lokulala.
9. Ukuhanjiswa kweqela
Nangona ixesha lamatheko lincinci kakhulu kunangaphambi kobhubhane, abantu basabhiyozela iiholide kunye nemihla yokuzalwa emakhaya. Ungathengisa izinto ezininzi zepati, kubandakanya iminqwazi yeqela, iibhaluni, amakhandlela omhla wokuzalwa, iitafile zeplastiki, iphepha lokusonga isipho, njl. Kuyacetyiswa ukuba uthengise izihombiso ezinemixholo kwiholide ezithile.
10. Incwadana yokubhalela
Iidayari kunye neencwadana zamanqaku ziyimfuneko ebalulekileyo yesikolo kubafundi. Ulutsha, ngakumbi amantombazana, njengeencwadana ezinemifanekiso emihle, ezinje ngeengcaphuno ezikhuthazayo, iimilo zejiyometri, iintyatyambo, iipateni zegrafiti, njlnjl. iimveliso.
11. Umququzeleli weDesktop
Umququzeleli wedesktop yitreyi esetyenziselwa ukwahlula iibhokisi zokubhala ezahlukeneyo kwaye zigcine zicocekile. Ezona ntlobo zixhaphakileyo zeebhokisi zokugqiba zezesikhumba, i-acrylic, iinkuni kunye nezinto zokwenza umnatha. Le mveliso yenza idesika yakho kunye nedrawer ibonakale ifana nobomi kwaye icwangcisiwe.
12. Iipeni ezinemibala
Iipeni zejeli ezinemibala, amakishayo amahle kunye neepensile ezinemibala zikulungele kakhulu ukugcina iidayari kunye nezicwangciso zokubhala. Benza ubugcisa babo babantwana. Abathengisi kufuneka bathenge iipeni ezinemibala kuba akukho mntu uya kuthenga ipeni nganye yokwahlula kwivenkile ekwi-intanethi.
13. Ukuhamba ngentambo
Ukuzonwabisa ngeRopekipping kuyonwabisa, kulula ukuyifunda kunye nokusebenzisa iikhalori ezininzi. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zokutsiba ngentambo kwintengiso. NgokweAmazon, iintambo zokutsiba kunye neentsimbi zokutsiba iintambo zomzimba okanye zomthambo zinentengiso enkulu. Ngokwendlela yeGoogle, iziphumo zophando "zokutsiba ngentambo" zonyuke kakhulu ngo-2020. Esona sizathu sokwanda okungaka kukuba iijingi zivaliwe okwethutyana okanye zivaliwe ngenxa yobhubhane, kwaye abantu kufuneka benze umthambo ekhaya. Phakathi kwabo, ukutsiba intambo yenye yezona mithambo zilungileyo.
14. Ibhendi yokuLwa
Imithambo yomthambo ziibhendi zelastiki ezisetyenziselwa ukomeleza izihlunu zemilenze, iingalo kunye nemilenze. Le mveliso lolunye uqeqesho lwezihlunu kunye nezixhobo ezomeleleyo zokuzilolonga ezinokusetyenziswa ziimbaleki ekhaya. Kuqikelelwa ukuba ngo-2020-2025, intengiso yebhendi yelizwe jikelele iya kukhula kwinqanaba lokukhula ngonyaka eliyi-9.91%.
I-Yoga iye yafumana ukuthandwa, ngakumbi phakathi kwabasetyhini, kuba izisa izibonelelo ezininzi zempilo kwaye iluncedo kakhulu kubaqalayo abafuna ukunqanda umthambo onzima. Ukuthengisa le mveliso, kufuneka ugxininise izibonelelo zokuthenga i-yoga mat. Eyona nto intle ngeyoga kukuba inokwenziwa naphina, kwaye yonke into oyifunayo yimati yeyoga.
16. Iithayithi zabafazi
Baninzi ngakumbi abantu basetyhini abathatha inxaxheba kwimidlalo, bekonyusa ibango lezemidlalo yabasetyhini (ngakumbi iileggings). Phakathi kwezona mveliso zilishumi zithengiswa kakhulu kwicandelo lezemidlalo laseAmazon elaziwa ngokuba yi "Sports and Outdoors", ezintathu zazo zezokuqina kwabasetyhini. Lo mkhuba kulindeleke ukuba uqhubeke.
17. Ibhotile yamanzi
Abantu bakhetha ukusebenzisa iibhotile zamanzi ezinokuphinda zisebenze kuba ngoku banolwazi ngakumbi ngemicimbi yendalo esingqongileyo. Iibhotile zamanzi zeplastiki ezinokuphinda zisetyenziselwe ezemidlalo zezona zinto zinenzuzo enkulu kuba iindleko zazo zemveliso ziphantsi ngokuthelekiswa neebhotile zentsimbi.
Emva kokufumana isikhokelo sendlela yokukhetha iimveliso zodidi oluphezulu, unokufumana iimveliso ezifanelekileyo kumaqonga ahlukeneyo okanye abathengisi. Ewe kunjalo, wamkelekile ukudibana iinkonzo zethu ukukunika esona sicwangciso sentsebenziswano;
Into eyoyikisayo iyeza